ပထမ၊ ကြွေထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ပုံစံကိုအက်စစ်၊ အယ်ကာလီနှင့်ရေတို့ဖြင့်သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ ထို့နောက်မော်ဒယ်သန့်ရှင်းရေးအဘို့အရေပူ၌နှစ်မြှုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောမှိုကိုခဲနှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများစုပ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းနှစ်မြှုပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သန့်ရှင်းသောမှိုကိုရေပူတွင်ပထမ ဦး စွာနှစ်မြှုပ်။ ကလိုဂျင့်ထဲသို့နှစ်ပြီးသောအထိအပူပေးသည်။ နှစ်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုပဏာမခြောက်သွေ့ရန်အတွက်မီးဖိုသို့ပို့သည်။ အမျှင်အတွင်းပိုင်းလက်ကိုထည့်သည်။ ရေပူကိုဖြည့်သည်။ ထို့နောက်မီးဖိုထဲသို့ vulkanization၊ အလယ်အလတ်အပူချိန်တွင်အခြောက်ခံ၊ ရေဆေးကြော၊ သွေ့ခြောက်ပြီးအပြီးတွင်ထုပ်ပိုးပြီးကုန်ချောကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံသို့ပို့သည်။
စေးလက်အိတ်များကိုသဘာဝကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအဖြစ်သဘာဝစေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စေးလက်အိတ်များကိုအက်ဆစ်နှင့်အယ်ကာလီတို့ဖြင့် ဦး စွာဆေးကြောပြီးရေဖြင့်ဆေးကြောသည်။ သန့်စင်ထားသောမော်ဒယ်ကိုရေပူတွင်ပထမဆုံးထည့်သွင်းပြီး gelling agent ကိုစုပ်ပြီးခြောက်သည်အထိအပူပေးသည်။ စိုပြီးသောအခါရေပူကိုကြိုတင်ခြောက်သွေ့ရန်အတွက်ရေပူထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်ဆေးကြောခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်မီးဖိုသို့ပို့ပါ။ ဆေးကြောပြီးလျှင်လက်အိတ်များကိုစစ်ဆေးရန်ဆေးကြောခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း၊ ရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်ထုပ်ပိုးပြီးကုန်ချောကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံသို့ပို့သည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ဘက်တီးရီးယားပိုးများပျံ့နှံ့လာခြင်းကြောင့်လက်အိတ်များ ၀ တ်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားအရေအတွက်သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထု၏အသိပညာများတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ယခုကမ္ဘာပေါ်တွင်နှစ်စဉ်လတ်ဆတ်လက်အိတ်လိုအပ်မှုသည်ဘီလီယံ ၃၀ ခန့်ရှိပြီး၎င်းအရေအတွက်သည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေ ဦး မည်။
မမြုံသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိုက်ထရိုင်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်သာမာန်နိုက်ထရိုင်းလက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ကွာခြားချက်မှာကုန်ကြမ်းအရည်အသွေးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်လိုအပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အဓိကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစနစ်၊ စွမ်းအင်စနစ်၊ အရန်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ အစိမ်းရောင်စက်ရုံများ၊
ရာဘာလက်အိတ်များကြားတွင်ကြယ်ပွင့်တစ်ခုအဖြစ်နိုက်ထရိုင်းလက်အိတ်များသည်စျေးကွက်အလားအလာရှိရမည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစျေးကွက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်နိုက်ထရိတ်လက်အိတ်လုပ်ငန်း၏စျေးကွက်အတိုင်းအတာသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ စျေးကွက်သုတေသနအချက်အလက်များအရရော်ဘာလက်အိတ်စျေးကွက်သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေပြီဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်ချဲ့ထွင်ရန်အလားအလာကောင်းရှိသည်။ nitrile ရော်ဘာလက်အိတ်မတော်တဆမှု flapper အဆို့ရှင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည်ဆက်လက်မြင့်တက်နေ ဦး မည်။ နိုက်ထရစ်လက်အိတ်များသည်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခါသုံးလက်အိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ခါသုံး nitrile လက်အိတ် acrylonitrile နှင့် butadiene ကနေဖန်တီးအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကလတ်စ်ကင်းနှင့်မတည့်သည်။ သူတို့သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်များတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ nitrile လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းသည်စျေးကွက်ကိုလျင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်ပြီးအမှာစာအမြောက်အများရရှိနိုင်သည်။
ပိုးကင်းအဆင့်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောနိုက်ထရိုင်လက်အိတ်များထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သာမန်နိုက်ထရိုင်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်ကွာခြားချက်များမှာ -
1. ကုန်ကြမ်း: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်နိုက်ထရစ်စေး
2. ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း: ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများ၏တိကျ
၃။ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ - အပိုစိမ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အီသလင်းအောက်ဆိုဒ်ပိုးသတ်ခြင်း
4. ဓာတုပုံသေနည်း: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိုးကင်းလက်အိတ်များအတွက်စီးပွားဖြစ်ပုံသေနည်း
PVC လက်အိတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်နှစ်မြှုပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၊ ယူနီဖောင်းဖလင်ပုံစံနှင့်တောက်ပသောအရောင်ရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အွန်လိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်း၏အရှည်မှာမီတာ ၆၀၊ မီတာ ၈၀ နှင့်မီတာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်မြင့်မားပြီးထွက်ရှိမှုကြီးမားသည်။ ၎င်းကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ဖောက်သည်၏ထုတ်လုပ်မှုနေရာအရထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အရှည်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
PVC လက်အိတ်များသည်နေ့စဉ်အသက်တာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပြီးကျန်းမာရေးအကာအကွယ်သက်ရောက်မှု၊ ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုဆိုသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများရှိကုန်ပစ္စည်းများသည်ဈေးကွက်ကျယ်ဝန်းသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်အမှုန့်လက်အိတ်များအဖြစ်ခွဲထားသည်။ (ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လက်အိတ်ကိုချောမွေ့စေရန်နှင့်ချောမွေ့စေရန်ပြောင်းဖူးမှုန့်အနည်းငယ်ကိုလက်အိတ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကပ်ထားသည်) နှင့်အမှုန့်ကင်းသောလက်အိတ်များ (လုပ်ငန်းစဉ်တွင် PU ကုသမှုခံယူသူသည်ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုထပ်တူအခန်းကဏ္ play မှအစားထိုးအသုံးပြုသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရစက်မှုအဆင့်လက်အိတ်များတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ရှိသောလက်အိတ်များရှိသည်။ (ခွဲခြားနိုင်သောအညွှန်းသည်အဓိကအားဖြင့်အပ်မျက်လုံးအရွယ်၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ) ပုံစံမှ XSSMLXL သို့ရှည်၊ ထူ၊ ထူရှည်၊ ကြာရှည်စွာခွဲခြားထားသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီး ထုတ်ကုန်များကိုအဓိကအားဖြင့်အမှုန့်လုပ်ငန်းအဆင့်နှင့်အမှုန့်ကင်းသောဆရာဝန် chat level SMLXL, ML တို့တွင်အဓိကထုတ်ဝေသည်။
Nitrile ဒြပ်ပေါင်းလက်အိတ်များသည် nitrile လက်အိတ်များနှင့် PVC လက်အိတ်များ၏အားသာချက်များရှိသည်။ သူတို့ကရောနှောကုန်ကြမ်းအတွက်ဗတ္တိဇံနေကြသည်။ လက်အိတ်၏အတွင်းပိုင်းအလွှာသည်ချောမွေ့။ ၀ တ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ လက်အိတ်သည် PVC လက်အိတ်များထက် elasticity ပိုကောင်းပြီးကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်။ လက်အိတ်၏အပြင်ဘက်အလွှာတွင်တိကျသောကိန်းတစ်ခုရှိပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးပြင်ပနှင့်အတွင်းချောချောမွေ့သောအဆင့်သို့ရောက်သည်။
လက်အိတ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကကုန်ကြမ်းများနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကိုပထမ ဦး ဆုံးသောအထူးကွန်တိန်နာတွင်ထည့်ပြီး emulsion အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်အချိုးအစားအတိုင်းရောနှောထားသည်။ စစ်ထုတ်ပြီးနောက်တွင်အရောအနှောကိုစုပ်စက်တစ်လုံးနှင့်အတူထုတ်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်းရှိနှစ်မြှုပ်ထားသောကန်သို့ပို့သည်။ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ တပ်ဆင်ရေးလိုင်းရှိလက်မှိုများသည်ကွင်းဆက်မှတဆင့်နှစ်မြှုပ်ထားသောတင့်ကားကိုအလိုအလျောက် ၀ င်ရောက်ပြီး၊ emulsion ကိုလိုက်နာသောလက်မှိုများသည်အရေကျသည့်တင့်ကားထဲမှထွက်လာပြီး၊ လက်မှိုယူနီဖောင်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်အဆိုပါချချ dripped အဆိုပါပိုလျှံပါစေ။ အဆိုပါယိုအရည်စုဆောင်းခြင်းအကြံပေးအဖွဲ့မှတဆင့်နှစ်မြှုပ်ခြင်းအကြံပေးအဖွဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ပိုလျှံ emulsion ယိုပြီးနောက်, လက်မှိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်အတူမီးဖိုထဲသို့လှုံ့ဆော်ပေး။ ဤအခြေအနေအောက်၌, လက်မှိုအပေါ် emulsion ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနှင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ မီးဖိုထဲမှလက်မှိုများသည်သဘာဝအအေးခံခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအလိုက်စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုအမြန်ဆုံးနှင့်အတင်းကျပ်ဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်စီမံကိန်းထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည့်အခွင့်အလမ်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းစက်ရုံ၊ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားအပြည့်အ ၀ ထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့တည်ဆောက်ထားသည်။